Jaaliyada Beesha Absame ee Waqooyiga Maraykanka oo Cambaaraysay Werarka Waqooyi Galbeed – Rasaasa News
Jan 18, 2012 Jaaliyada Beesha Absame ee Waqooyiga Maraykanka
Cambaarany: Anaga oo ku hadleyna magaca Jaaliyadda Absame ee ku dhaqan Waqooyiga Maraykanka, waxaan cambaareynaynaa weerarkii gardarada ahaa ee beesha Isaaq, ay ku qaadeen dagmada Buuhoodle. Weerarkaas oo ay soo abaabuleen maamul beeleedka Hargeysa.
Waxaa nasiibdaro ah oo wax laga xuumaado ah in Beesha Isaaq ku riyooto, in beelo kale oo la mida ama ka badan ay tidhaahdo anaa idin ku xukumi dhulkiina oo idiin dawladayn, isla markaana Somaliya waan idiinka gooyey.
Hadaba, waxaa amaan mudaan labada maamul ee Khaatumo State iyo Awdal State, oo cadeeyay in midnimada Somaliya ay muqadas tahay isla markaana ay hoos yimaadaan (DFKG) ee Somaliya.
Sidaas oo kale waxaa la yaab leh oo in la isweydiiyo mudan Beesha Isaaq aaway, salaadiinteedii, waxgaradkeedii, cuqaasheedii, culumadeedii, ma waxay ka midaysan yihiin BM ka iyo Taangiga caruurta guryahooda hurda lagu garaacayo, mise waxaan dhihi karnaa howshoodii ayey gabeen oo xil masaarna? Jawaabta iyagaan u deynaynaa.
Beesha caalamka waxaan ka codsaneynaa, mar haddii beelihii Somaliland ku midoobay ay ahaayeen kuwa ugu tunka weyn Isaaq, Dhulbahante, iyo Gadabuursi ay ku kala tageen, sidaa darted waxaan codsaneynaa in si siman wax logu qaybsho, isla markaana ay masuuliyadeeda qaadan doonaan beesha maamulka Hargeysa xasuuqii ay ka geysteen dagmada Buuhoodle.
Waxaan u diraynaa tacsi tiiraanyo leh eheladii, qaraabadii, iyo dhamaan beelwaynta Dhulbahante ee ay ka geeriyooden, shuhadadii gacanta ka xaqdaran dishay, kuwaas oo ay ka mid ahaayen caruur, haween iyo dad aan waxba galabsan oo guryahoodii hurda.
Sidoo kale DFKG ee Somaliya waxaan ka codsaneynaa in maamulbeleedka Hargeysa ay u cadeeyaan waajibaadka dastuuriga ah ee qaranimada Somaliya isla markaana beel ayna beel kale ka goyn Karin Jumhuuriyada Somaliya iyadana aysan go’i karin.
Abdi Amed Shuuriye